Ma Jiraan baxsi, Kaniisada Adduunka ee Switzerland (WKG)
Ganacsi telefishan oo duug ah oo loogu talagalay budada qubayska ayaa muujinaya naag xanaaq badan kadib maalin aad u mashquul badan, taraafikada, biilasha, dharka lagu dhaqo, iwm. Goobtu waxay isu rogtay isla naagtii oo deggan oo ku faraxsan saxanka maydhashada, halka carruurteeda ay qaylo ka dhex dhigayaan qolka xiga.
Miyayna ahayn wax weyn haddii aan si dhib yar u tirtirno dhibaatooyinkeenna oo aan ku maydhayno bullaacadda biyo-mareenka? Nasiib darrose, baaritaannadayada iyo dhibaatooyinkayadu badanaa way ka xoog badan yihiin maqaarkayagu wuu adag yahay mana fududa in la maydho. Waxay u muuqdaan inay nagu dhejinayaan.
Hooyo Theresa waxay mar dhahday nolosheedii oo aan "sariir lagu xidhin". Waxaan kaliya si buuxda u xaqiijin karnaa bayaankan, in kasta oo aan isku dayay inaan sameeyo qaybtayda anigoo geedo badan oo ubaxa ah ka dhex abuurtay beerta gurigayga intii suurtagal ah!
Shaki, rajo xumo iyo murugo ayaa dhamaanteen ina soo gaadhay. Waxay bilaabaan marka aan nahay caruur yar yar oo na soo raaco ilaa aan ka galeyno da’da dahabiga ah. Waxaan baranaa sida loola macaamilo shakiga, niyad jab iyo murugo iyo inaan la kulanno.
Laakiin maxay dadka qaar ugu muuqdaan inay wax ka qaban kari waayaan dhibaatooyinkaas ka wanaagsan kuwa kale? Farqiga, dabcan, wuxuu ku saleysan yahay waxaan aaminsanahay. Khibradaha argagaxa leh wali waa kuwa argagax leh, laakiin aaminaada ayaa xanuunka ka bixi karta.
Miyayna ahayn wax xanuun badan inaad shaqadaada weyso oo aad la kulanto dhibaatooyinka ka dhalan kara? Haa, laakiin iimaanku wuxuu noo xaqiijinayaa in Ilaah na siinayo baahiyahayaga (Matayos 6,25). Miyayna xanuun lahayn in la waayo qof aad jeceshahay? Dabcan, laakiin iimaanku wuxuu noo xaqiijinayaa inaanu qofkan mar labaad ku arki doono jidh cusub (1 Korintos 15,42:XNUMX).
Miyay tijaabad kasta ama dhibaato kasta dhib leedahay? Maya, laakiin aaminaada Ilaah ayaa nagu qancisa inuu Ciise keligiis naga tagi doonin, dhib kasta oo aan haysano hadda (Cibraaniyada 13,5: 11,28). Wuxuu ku faraxsan yahay inuu naga fududeeyo culayskayaga (Matayos 30-37,28). Wuxuu jecel yahay inuu raaco qof kasta oo isaga isku halleeya (Sabuurradii 97,10) oo ilaaliya rumaystaha (Sabuurradii XNUMX).
Iimaanku dhibaatooyinkayagu ma baabiiyo, xanuunkuna wuu sii socdaa. Laakiin annaguna waannu garanaynaa oo waannu ku kalsoon nahay kii naftiisa nafteenna u bixiyey. Wuxuu la xanuunsaday xanuun ka badan sidii aan malayn karin. Isaga wuu naga raaci karaa xanuunka.
Hore u soco oo qaado qubayskan kulul ee xumbada kulul. Shumac shumaca, cun shukulaatada oo aqri danbilaha wanaagsan. Markaa markii aad ka soo baxdo tubbada, dhibaatooyinka wali way jiraan, laakiin waa sidaas oo kale Ciise. Nagama jiideyso, sida Calgon uu sheeganayo, laakiin sidoo kale kuma baabi'iyo marinka biyuhu. Had iyo jeer wuu jiri doonaa.